MYITMYAT – Page4– NEWS AND ENTERTAINMENT
[ May 14, 2019 ] လောက သစ္စာ တရား၏ ဒဏ်	ဆေးမြီတို
[ May 14, 2019 ] အဆိပ်​ အားလုံးရဲ့ ဘုရင်​ ​မြွေ​ဟောက်​ပင်​	ဆေးမြီတို
[ May 14, 2019 ] သွေးစုနာ (ခ) မွေးကျွတ်နာ အတွက် ဆေးနည်း	ဆေးမြီတို
[ May 14, 2019 ] လေထိုး လေအောင့် နှင့် အစာအိမ်နာ အတွက်​ ကြက်မောက်ဆူးပြန် (သို့) ကျွဲနှာခေါင်းချိတ်ပင်	ဆေးမြီတို
[ May 14, 2019 ] ကြွက်နို့ နှင့် ငါးမျက်စိ လွယ်လွယ်လေးသတ်မယ်	ဆေးမြီတို
အလှူငွေတွေအများကြီးရနေပေမယ့် ငါးကန်သန့်ရှင်းရေးမလုပ်နိုင်တဲ့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးဂေါပကအဖွဲ့
May 13, 2019 Myit Myat 0
အလှူငွေတွေအများကြီးရနေပေမယ့် ငါးကန်သန့်ရှင်းရေးမလုပ်နိုင်တဲ့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးဂေါပကအဖွဲ့ အရမ်းစိတ်​ပျက်​စရာနဲ့သနားစရာမြင်​ကွင်း.. ဒီ​နေ့ဘုရားကြီးသွားတယ်​..မ​ရောက်​တာကြာလို့ငါးကန်​ဘက်​သွားတာဒီလိုမြင်​​တွေ့ခဲ့ရတယ်​.ငါးကြီး​တွေက​သေ​နေပြီ..ပုပ်​ပွလို့ ပုပ်​​စော်​​တွေလဲနံ ငါး​တွေက အ​ပေါ်​မော့ပြီး ပါးစပ်​ကြီးဟလို့..ကိုယ်​ကလဲ ဘုမသိဘမသိနဲ့ပူလို့လားထင်​​မိ​သေး ​ရေထဲကငါး​တွေကို….ကြည့်​​နေရင်း​သေ​နေတဲ့ငါး​တွေကို ကျန်တဲ့ငါး​တွေက စား​နေတာ မြင်​​တော့လန့်​သွားတယ်​။ စိတ်​ထင်​ပြီး အစာ​ကျွေးကြည့်​​တော့ အရမ်းကိုလန့်​သွားတယ်​..ငါး​လေး​တွေ သိပ်​ဆာ​နေတယ်​..အရင်​ကလဲ ငါးစာ​ကျွေး ဖူးပါတယ်​ အဲ့​လောက်​​ကြောက်​စရာ မစားဖူးဘူး..ပြီး​တော့အမှိုက်​​တွေလဲပွလို့…စိတ်​ထင်​တာ မမှားရင်​ ငတ့်​​သေရင်​​သေ မ​သေရင်​ ညစ်​ပတ်​တာပဲ။ သနားစရာငါး​လေး​တွေ..ဘုရားဝန်းကျင်​မှာ​နေပြီး မငြိမ်းချမ်းတဲ့အပြင်​ ငတ်​ပြတ်​လို့ … ဓာတ်​ပုံ​တွေထရိုက်​​တော့ သန့်​ရှင်း​ရေးနဲ့လုံခြုံ​ရေး​တွေ​ပြေးလာတယ်​..အခုမှသိလို့လား ကိုယ်​ရိုက်​လို့လား​တော့မသိဘူး… အခုမှသိတာလိုလိုနဲ့ကြည့်​​နေကြတာ.ငါး​တွေကဖြင့်​ စားထားလို့အရိုးဖြင့်​ကျန်​​တော့မယ်​။ […]
ညည နှစ်​​ထောင်​​ပေးမယ်​ ငါး​ထောင်​​ပေးမယ်ဆိုပြီး ခြေ​တော်​တင်​ဖို့ ကြိုးစားကြသူ​တွေဝိုင်းနေတဲ့ ၁၈ နှစ်​အရွယ် က​လေးအ​မေ
ညည နှစ်​​ထောင်​​ပေးမယ်​ ငါး​ထောင်​​ပေးမယ်​တဲ့- က​လေးအ​မေ ၁၈ နှစ်​အရွယ်​​လေးခဗျာ မကူညီဘဲ ​ခြေ​တော်​တင်​ဖို့ ကြိုးစားကြသူ​တွေ ရဲ့ ဝိုင်းရံ​နေခြင်းကိုခံရတယ်​ ညည နှစ်​​ထောင်​ ငါး​ထောင်​ ကိုပဲထိုင်​ယူ​နေရင်​​တောင်​ သူ့ သမီး​လေးနဲ့ သူ အဆင်​​ပြေတဲ့ဘဝ ရနိူင်​​ကောင်းရဲ့ သို့ ​သော်​လဲ ဇာမဏီငှက်​တို့ ရဲ့ နှလုံးသားလိုမျိုး အသက်​​သေမှ အမြှီးကျွတ်​ခံမယ်​ဆိုတဲ့စိတ်​နဲ့အနီးနား အဝတ်​​လျှော်​ မီးပူတိုက်​ရင်းဖြူစင်​စွာ သားအမိနှစ်​​ယောက်​ အသက်​​မွေးမြူကြတယ်​ အိမ်​ကအစုတ်​လူ​တွေကလဲ အစုတ်​ဒါ​ပေမယ့်​ […]
သားကိုသာသနာ့ဘောင်မှာထားခဲ့ပြီး ဘိလပ်ကိုပြန်တော့မယ့် အောင်ရင်
May 12, 2019 Myit Myat 0
မူးယစ်ဆေးဝါးအမူကြောင့် ထောင်ဒဏ် (၁၇) နှစ်တိတိချခံရပြီး အကျဉ်းထောင်ထဲကို ရောက်ရှိနေခဲ့ရတဲ့ မိုးအောင်ရင်ကတော့ မေလ (၇) ရက်နေ့မှာပဲ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြောင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ မိုးအောင်ရင်အတွက် အနုပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းမှ ညီအစ်ကို မောင်နှမများနဲ့ ပရိသတ်တွေများစွာတို့က မိဘများနဲ့ထပ်တူ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေခဲ့ကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ကမှရဟန်းဘ၀ရောက်သွားတဲ့သားလေး မိုးအောင်ရင် နဲ့အမှတ်တရပုံလေးတွေတေးသံရှင်ဖခင်အောင်ရင်ကမကြာခင်ကပဲ “သားကသင်္ကန်းစီး ပြီး မေဃဇယ […]
ဓါးနဲ့ ပြန်ခုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ မန္တလေးက ဓါးကိုင်လူမိုက်တွေကို ဖမ်းလိုက်ပြီ
မန်းလေးတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတောင် ဓါးနဲ့ ပြန်ခုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဓါးကိုင်သောင်းကျန်းနေသူများအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၊ တိုင်းမှုခင်းအကူဌာနစိတ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သက်သေများနှင့်အတူ မှုခင်းကျဆင်းရေး ဆောင်ရွက်နေစဉ် ၉-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် မှုခင်းကျဆင်းရေးစီမံချက်ဆောင်ရွက်စဉ် အရပ်ဝတ်ဖြင့်သွင်ယူပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့် ဒုစရိုက်သမားများအား စုံစမ်းဖမ်းဆီးရန် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ၇၄ လမ်းနှင့် ၇၃ လမ်းကြား၊ မင်္ဂလာလမ်းအတိုင်း အနောက်မှ အရှေ့သို့ မောင်းနှင်လာစဉ် မင်္ဂလာလမ်းအတိုင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ၅၄ယ/၈၆၁၁၉၊ ဟွန်ဒါကလစ် အနက်ရောင် […]
မင်းမဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာကျနော်နေပါတယ်….အားလုံးလဲသွားလဲသတိ လာလဲသတိလေးနဲ့သွားလာကျပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်….. မင်းမဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာကျနော်နေပါတယ်…. မသွားနဲ့မလာနဲ့လို့တော့ကျနော်မပြောလိုပါဘူး…ဒါပေမဲ့အရေးတကြီးသွားရမယ်ဆိုတော့သတိလေးနဲ့သွားလာကျပါ…ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သက်သက်ကြီးတော့မသွားကျပါနဲ့လို့ကျနော်အသိလေးပေးပါရစေချစ်သောမိတ်ဆွေ… ၁၀.၅.၂၀၁၉ည၇နာရီ၄၉မိနစ်အချိန်တွင်၇၈လမ်းကနေ၃၈လမ်းစကွေ့ခါစရှိသေးအနောက်ကနေဆိုင်ကယ်၂စီးနဲ့လူ၆ယောက်ကကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်ကိုလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးပစ်ကျပါတယ်….. ကျနော်တို့ညီကိုသူတို့နဲ့ရန်ညှိးရန်စလဲမရှိပါဘူးဗျာ ..အဲ့နေ့ကကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့အပြင်ထွက်မိတာပါ…ဘာရန်ညှိးရန်စမှမရှိပါဘူး….သက်သက်မဲ့ကိုလိုက်ပြီးလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ…ပထမတစ်ချက်ပစ်တော့သတိမထားမိဘူးသြော်ကားကဂဲနင်းမိလိုချော်မှန်တာပဲနေမှာပါဆိုထားလိုက်တယ်… နောက်တစ်ချက်ခါးကိုမှန်တယ်..ဒါသွေးရိုးသားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ချိန်မျက်နှာကိုMaskအုပ်ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်၂စီးနဲ့လူ၆ယောက်အဖွဲ့ကကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်မောင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်နောက်ကနေကျနော်တို့ကိုလေးဂွတွေနဲ့ပစ်နေတော့တာပဲ… ဒါနဲ့ကျနော်ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်းတောင်းပန်တာပေါ့အကိုတို့ဘာလိုချင်လို့လဲဆိုင်ကယ်လိုချင်လို့လားဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံတို့လိုချင်လို့လားမေးတော့သူတို့ကမင်းစောက်ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားဆိုပြီးလေးဂွနဲ့ပါးစပ်ကိုပစ်လိုက်ပါတယ်…ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကွဲပြီးသွားတွေလဲကျွတ်ထွက်သွားပါတယ်.. အဲ့နာနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးသံလမ်းကျော်အောင်မောင်းပြီးလမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကူညီတောင်းပါတယ်..ကျနော်တို့လေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်နေလို့ကူညီပါဦးလို့ပြောတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကကျနော်တို့ကိုမျက်နှာလွဲဂဲပစ်မသိဟန်ပြုပြီးရှောင်တိန်းထွက်ခွားသွားကျပါတယ်… အဲ့အချိန်သူတို့အဖွဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးလေးဂွတွေနဲ့ပစ်ကျပါတယ်ကျနော့်ညီကတော့နောက်ကျောတပြင်လုံးသူတို့ပစ်တဲ့ဖန်ပေသီးအရာစက်ဘီးဂုန်းတွေမူလီတွေအစရှိတာတွေနဲ့ပစ်ခက်ချင်းကိုလဲခံရပါတယ်…… မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးကျနော်တို့ဆိုင်ကယ်စက်နှိုးပြီးကျနော်တို့နေတဲ့ဘက်ကိုဇွတ်အတင်းမောင်းနှင်လာခဲ့တယ်…တစ်လမ်းလုံးကယ်တော်မှုကျပါဦးကျနော်တို့ကိုလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်နေကျပါတယ်လို့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းသော်ညားလဲများပြာလှတဲ့လူတွေကတုပ်တုပ်မျှမလှပ်ပဲသူတို့လမ်းသူတို့သွားပြီးရှောင်ကွင်းသွားကျပါတယ်…. ကူညီမဲ့သူမဲ့နေတဲ့ကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်မဖြစ်ဖူးသူတို့လက်ထဲတော့အသေမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကျနော်တို့နေတဲ့စိန်ပန်း၄၁လမ်းလမ်းကြီးပေါ်ရအောင်မောင်းခဲ့ပါတယ်….ကျနော်တို့ကိုဘယ်မှပြေးမရအောင်ဆိုင်ကယ်၂စီးညှပ်ပြီးလိုက်ပစ်ပါတယ်..ဘယ်မှလဲဝင်မရဘူးဘ်ာသူ့မှလဲအကူညီမတောင်းလိုက်ရတော့ဘူး. .နောက်ဆုံးဘီယာဆိုင်ထဲကိုထိုးဝင်လိုက်တယ်…ကျနော့်ညီဆင်းပြေးဘီယာဆိုထဲဝင်အကူညီတောင်းတယ်…တသ်ယောက်မှမကူညီသောက်မြဲတိုင်းသောက်နေကျတယ်…အဲ့အချိန်မှာဆိုငကြယ်ရပ်ပြီးကျနော်ဆင်းပြေးမယ်အလုပ်သူတို့လမ်းပစ်လိုက်တယ်..ကျနော့်မေးရိုးကိုထိမှန်သွားတယ်… အဲ့ဒီမှာကျနော်မျက်လုံးတွေပြာထွက်သွားပြီးမလှုပ်နိုင်တော့ဘူး…ဆိုင်ကယ်ပေါ်ခွရပ်ကြီးနဲ့နောက်တစ်ချက်ဆက်ပစ်လိုက်တယ်ကျနော်နားအုံပွင့်သွားတယ်ကျနော်လဲဆိုင်ကယ်နဲ့ထပ်ရပ်ကြီးလဲနေတဲ့အချိန်ဆက်ပစ်ပါတယ်ကျနော့်ညီလဲအကူမရတဲ့အဆုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဂဲတွေကောက်ပြီးကျနော့်ကိုပစ်နေတဲ့လူတွေကကိုလှမ်းပစ်နေတယ်.. အဲ့အချိန်မှဘီယာဆိုင်ထဲကလူတွေဝိုင်းအုံပြီးထွက်လာကျတယ်…ဒါမှကျနော်လဲသူတို့ရဲ့အသက်ဘေးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်..သွေးတွေစီးအိုင်ကျနေတဲ့ကျနော့်ကိုကောက်ထူးရင်းဘေးမှာရှိတဲ့ ၂၄နာရီဆေးခန်းကိုကျနော့်ညီကဆွဲခေါ်သွားတယ်. .ဆေးခန်းထဲအရောက်မှာသေမတတ်ဖြစ်နေတဲ့ကျနော်ကိုဆေးခန်းထဲကဆရာမကရောက်ရောက်ချင်းစောက်နဲ့ထွင်းဆိုသလိုပဲရှင့်ကိုကျမဆေးကုမပေးမနိုင်ဘူးတဲ့ရှင့်ဆေးရုံကြီးသွားမှရမယ်တဲ့ဒါဆိုလဲဆရာမယ်သွေးတိတ်အောင်တော့လုပ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ပြီးပြောတော့ဂွမ်းလေးနဲ့ဖိပေးလိုက်တယ်တဲ့ အဲ့တာတောင်သူ့ရဲ့အကူသူနာပြုကလုပ်ပေးလိုက်တာသူကတော့ဖုန်းပွတ်နေလေရဲ့ကျနော်သူတို့ကိုပစ်တင်ဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘာလို့အကျင်နာတရားခေါင်းပါးနေကျတာလဲဘာလို့မကူညီချင်တာလဲဆိုပြီးအတွေးတွေဝင်ရောက်လာတယ်..တစ်လမ်းလုံးကလူတွေကလဲမကြားတာလား?မမြင်တာလားဆိုပြီးတွေးမိတယ်..သွေးလွန်ပြီးမျက်လုံးတွေပြာလာတဲ့နောက်ဆုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီးမန္တလေးဆေးရုံကြီးကိုအရောက်သွားရတော့တယ်… .ရောက်တော့လူနာစာရင်းတင်မေးတာဖြေနေရတယ်ဆေးမထည့်ပေးသေးဘူးချုပ်လဲမပေးသေးဘူး…သူတို့မေးသမျှကိုအရင်ဖြေပေးနေရတယ်…ကျနော်နားလည်ပေးပါတယ်အဲ့တာတွေကိုနောက်ဆုံးချုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့အပ်ကိုနှမျောလို့တဲ့ကျနော်အမေကိုအပ်သွားဝယ်ခိုင်းတယ်…ဝယ်ပြီးပြန်လာတော့လဲသူ့အပ်နဲ့ပဲချုပ်ပေးတော့မယ်ဆိုပြီးချုပ်ပေးတယ်..သေရမယ်နာတွေဆိုသေနေလောက်ပြီ သူတို့လုပ်နေတာနဲ့တင်ချုပ်လဲပြီးရောမှု့ ခင်းရဲရောက်လာပါလေရောကျနော့်ကိုနာမေးတယ်အသက်မေးတယ်ဘယ်မှာနေတာလဲမေးပြီးရောဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့ဒဏ်ရာရတာလဲတဲ့မေးတယ်…၇၈လမ်း၃၈လမ်းထောင့်လို့လဲပြောရောဘာမှဆက်မမေးတော့ဘူး… သူ့နေရာသူပြန်ထိုင်နေတယ်သူ့တာဝန်မဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့စတိုင်ကြီးနဲ့လစ်သွားတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကျတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့နေရာထိလိုက်မေးတယ်….ကျနော်လဲဓာတ်မှန်သွားရိုက်မယ်အလုပ်ဘေးကပြောသံလေးကြားလိုက်တယ်….မနေ့ကလဲအဲ့လိုပဲလေးဂွနဲ့လိုက်ပစ်ခံရလို့အမှတ်( ၉ )ရဲစခန်းကိုသွားတိုင်တာတဲ့လေးဂွနဲ့ပစ်တဲ့အမှုတွေများ နေပြီတဲ့ကျနော်တို့ဘယ်လိုက်ဖမ်းရမှာလဲတဲ့…? ကျနော်ပြောချင်တာကရဲဆိုတဲ့အမျိုးကဘယ်နေရာမှာလူမိုက်ရှိတယ်…?ဘယ်နေရာမှာသူခိုးဂျပိုးရှိတယ်…?ဘယ်နေရာမှာမူးယစ်သူရှိတယ်ဆိုတာသူတို့အပိုင်သိပြီးသားပါဗျာ…အခုဟာကတာဝန်မဲ့တဲ့စကားကြီးပြောထွက်ရက်တယ်…သူတို့ဖမ်းချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးပါဒီလိုကြီးတာဝန်မဲ့စကားတော့ပြောမထွက်ရက်သင့်ဘူး…?ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့သေချာစုံစမ်းပေးပါ့မယ်အမှုအမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်အမြန်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ်ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်အားရအောင်တော့ပြောပေးသင့်ပါတယ်….. ကျနော်မဖြစ်ခင်သတင်းတစ်ခုကြားမိသေးတယ်…မြစ်သစ်ဘက်မှာလဲလူရိုက်ပြီးလုပြေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုပြာ်သူတွေကဝိုင်းဖမ်းရဲလက်ကိုအပ်ခဲ့ကျတယ်တဲ့မကြာပါဘူးမနက်မိုးလင်းတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဗျာ…ကျနော်တွေးမိတာလေးပေါ့ဗျာ အဲ့ဆိုအဲ့လုယက်ခိုးဆိုးနေတဲ့လူတွေနဲ့ကရသမျှကိုတဝက်စီယူပြီးလုပ်စားနေကျတာလားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပိုက်ဆံရှိသားသမီးတွေကဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီးအဲ့ထဲကိုလိုလိုက်လုပ်ရဲနဲ့ပူးပေါင်းတဝက်စီခွဲယူ…ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကရဲတွေကိုပြန်ပြီးခြိမ်းခြောက်ထားလို့ဒါမှမဟုတ်ရဲသားသမီးတွေလားလို့ကျနော်တွေးမိတယ်…. ကျနော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်ရဲကိုအဖေခေါ်ပြီးဘယ်သူ့ကိုအားကိုးရတော့မှာလဲဗျာ…ထိခိုက်နစ်နာနေတဲ့ကျနော်တို့လိုပြည်သူတွေလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေကျတော့မှာလား..?ကျနော်တို့ပြည်သူတွေသေပေးရတော့မှာလား….?အခုလိုချိန်မှာခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေဆိုဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေကျမှာလာ….? ခင်ဗျားတို့ယူနေတဲ့လစာ…ခင်ဗျားတို့စားသောက်ဝတ်စားနေတာကလဲပြည်သူတွေကပေးကျွေးနေတာလေဗျာ…အခုတော့ပြည်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကမသိကျွေးကျွန်ပြုနေကျပြီလား? ခင်ဗျားတို့အတွက်နဲ့တကယ်ပြည်သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ရဲအရာရှိတွေလဲသိက္ခာကျတယ်…ပြည်သူကိုတကယ်ချစ်တဲ့ရဲအရာရှိတွေလဲလူမုန်းခံရတော့မယ်….ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးလောက်အသိဥာဏ်မရှိကျတော့ဘူးလားဗျာ….. တစ်ခုတော့ပြောချင်မိတယ်…ခင်ဗျားသားသမီးတွေလဲကျနော်တို့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျနော်တို့မိဘတွေမျက်ရည်ကျသလိုမကျမိပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းမိတယ်… ကျနော်တို့ကိုလုပ်တဲ့၆ယောက်အဖွဲ့လဲကျနော်တို့နာကျင်ခံစားရသလိုသူတို့လဲကျနော်တိုိ့လိုဝေဒနာမခံစားရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်… အားလုံးလဲသွားလဲသတိလာလဲသတိလေးနဲ့သွားလာကျပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်…..